हुवावेईमाथिको प्रतिबन्ध घटाउला त अमेरिका ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय हुवावेईमाथिको प्रतिबन्ध घटाउला त अमेरिका ?
हुवावेईमाथिको प्रतिबन्ध घटाउला त अमेरिका ?
काठमाडौं (अस) । अमेरिका र चीनबीच व्यापार वार्ता रोकिएसँगै दुवै देश फेरि महशुल युद्धमा होमिएका छन् । व्यापार सम्झौताका लागि आआफ्नो तर्फबाट लचकता देखाइरहेका यी देश अहिले भने आक्रामक देखिएका छन् । गत हप्ता मात्रै अमेरिकाले चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेईलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने ठानिएका विदेशी उपकरण जडानमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले हुवावेई र यससँग सम्बन्धित ७० ओटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा पनि राख्यो ।
तर, सो प्रतिबन्धका कारण कम्पनीका विद्यमान उपभोक्तालाई सेवा दिन नमिल्ने भएपछि मन्त्रालयले हुवावेईमाथिको प्रतिबन्ध केही खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ । प्रतिबन्धका कारण हुवावेईको उपकरण प्रयोग गरिरहेका अमेरिकी कम्पनीलाई पर्न सक्ने क्षति टार्न अस्थायी सामान्य लाइसेन्स दिनेबारे सोचविचार भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयको एक प्रवक्ताले बताएकी छन् । यो लाइसेन्स ९० दिनसम्म मान्य हुनेछ ।
मन्त्रालयले लाइसेन्स जारी गरे पनि हुवावेईसँग करोबार गर्न अमेरिकी आपूर्तिकर्ताहरूलाई छुट्टै लाइसेन्स चाहिनेछ । यसले हालैका वर्षमा हुवावेईको दूरसञ्चार उपकरण किनेका मोबाइल फोन प्रदायकहरूलाई राहत मिल्नेछ ।
तर, यस्तो लाइसेन्स प्राप्त गर्न भने अति नै गाह्रो हुने बताइएको छ । नेटवर्क र उपकरणप्रति विद्यमान ग्राहकहरूको विश्वसनीयता कायम होस् भनेर मन्त्रालयले हुवावेईलाई अमेरिकी सामग्री किन्ने अनुमति दिन सक्ने सम्भावना पनि धेरै छ । तर, उसले नयाँ सामग्री उत्पादन गर्न अमेरिकी कम्पनीहरूले बनाएका पार्ट्स र कम्पोनेन्टहरू किन्ने अनुमति भने पाउने छैन ।
हुवावेईको स्मार्टफोन र दूरसञ्चार उपकरणको माध्यमबाट चीनले अमेरिकीहरूको जासूसी गर्न सक्ने आरोप अमेरिकाले बारम्बार लगाएको छ । तर, हुवावेईले भने यस आरोपको खण्डन गर्दैैै आएको छ ।